February 28, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu magaalada Muqdisho ka furay shir heer caalami ah oo looga hadlayo abaaraha ka jira dalka Soomaaliya.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubno ka socday Beesha Caalamka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira.
Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad dheer ka jeediyay Shirka, ayaa sheegay in shirka bisha May ka dhici doona magaalada London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ay geyn doonto istaraatiijiyad cad oo ay dowladda ka leedahay abaaraha soo laa laabtay ee dalka, waxana uu ugu baaqay Midowga Africa, Midowga Yurub, OIC iyo saaxiibada caalamka in ay kala qeyb-qaataan badbaadinta nolosha dad badan oo Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa waxa kale oo uu xusay in abaarta ay gobolka geeska afrika oo dhan ka jirto, laakiin dalka Soomaaliya ay u nugushahay xilligan, waxa uu si gaar ah uga hadlay in muhiimaddu ay tahay in gurmadka laga bilaabo waxyaabaha aas-saasiga u ah nolosha bini’aadamka.
Wakiilladii ka socday beesha caalamka, ayaa sameeyey ballan-qaadyo ay ku sheegeen in si deg deg ah loo fulin doono.